Ithegi: 3 | Martech Zone
Yandisa iBlog Traffic ngokuVusa iZithuba zeBhlog yakudala
NgoLwesihlanu, Julayi 10, 2009 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Nangona ndisondele kwizithuba zebhlog ze2,000 Martech Zone, oko akuthethi ukuba wonke umsebenzi onzima endiwuthululeyo kwisithuba ngasinye uyaqatshelwa. Bambalwa abantu abayiqondayo, kodwa kunokwenzeka ukuvuselela izithuba zeblogi ezindala kunye nokufumana abantu abaninzi. Kule veki imveliso entsha ifike kwintengiso yinto engummangaliso yokuvuselela iiposti zebhlog ezindala. (Ingasetyenziselwa kumaphepha ewebhu, nawo, ewe). I-SEOPivot ihlalutya amaphepha esiza sakho kunye
Ividiyo: Umxholo xa kuthelekiswa ne-Backlinks
NgeCawa, Oktobha 26, 2008 NgoLwesihlanu, Oktobha 17, 2014 Douglas Karr
Abantu abaninzi bachitha kwaye bathengise ixesha labo ekusebenzeni kwewebhusayithi yabo, kwaye baqala ukukrwitsha iintloko zabo xa enye indawo inendawo ephezulu kodwa ayilungiswanga. Kungenxa yokuba ukwandiswa komxholo sisiqingatha sedabi, kukufumana ingqalelo kwezinye iisayithi ezityhala indawo yakho kwiziphumo zokuKhangela. Umsebenzi weinjini yokukhangela kukubonelela ngeziphumo ezifanelekileyo. Ukuba uninzi lwezinye iisayithi ezihlonishwayo zikhomba kuwe